Abdii Fiixee - Wikipedia
Abdii Fiixee waloo, gaazexeessa, barreessaa, fi qabasaawa mirga Oromoo ti. Abdiin meeshaalee sab-qunnamtii adda addaa keessatti hojjachuu fi barreeffamoota walaloo fi asoosamaa adda addaa barreessuun beekkama.
Ijoollummaa Isaa[edit | Lakkaddaa gulaali]
Abdiin kan dhalate Wallagga Lixaa Boojji keessatti yoo ta'u yeroo inni daa'ima turetti maatiinsaa gara magaala Naqamteetti godaanan. Abdiinis maatii isaa wajjiniin Naqamte galuun Naqamtetti guddate. Abdiin barnootasaas kutaa tokkoo hanga kudhanii achuma Naqamtetti kan barate yoo ta'u kutaa kudha-tokkoo fi kudha-lamaa ammoo Najjootti barate. Barnoota sadarkaa lammaffaa erga xumuree booda, Abdiin gara Ameerikaatti godaane. Ameerikaattis mana barumsaa galuudhaan ogummaa fiilmii baratee xumure.
Barreeffamoota Isaa[edit | Lakkaddaa gulaali]
Abdiin jaala barreessuu guddaa akka qabu dubbata. Irra guddinaan walaloo fi asoosama barreessudhaan beekkama. Barreessudhaaf namoota fakkeenya naa ta'an keessaa Onesimos Nasib, Asteer Gannoo fi Dhaabaa Wayyeessaa akka ta'an dubbata.
Dhoksaa Jireenyaa (Mudde 2011)
Retrieved from "https://om.wikipedia.org/w/index.php?title=Abdii_Fiixee&oldid=29643"
This page was last edited on 24 Adooleessa 2017, at 06:21.